Umhla My Pet » 5 Izinto ukuba Yithi Bakhumbuze Kwakhe okudingayo
5 Izinto ukuba Yithi Bakhumbuze Kwakhe okudingayo
ukubuyekezwa: Aug. 03 2020 | 2 min ukufunda
Oku ngenene lula kakhulu ukuba zithi izinto zibonisa mfo ukuba umkhathalele ukanti, ngakumbi ubudlelwane bexesha elide apho sithatha mfo siphakathi lula, thina zithande ukuba. Ikakhulu ngenxa kubudlelwane elide sivakalelwa ngathi udlulile abenza ezo onothando ngokuphandle kwaye ubukhulu ukuba mhlawumbi kuyinyaniso kuba bakholisekile neqabane lakho. Kodwa yonke ngoku ke kukho kancinane, izinto understated unako ukuthi ukubonisa ukuba umkhathalele kwaye ukukhumbuza ukuba ifuna wena kanye njengokuba wenzayo ngemihla kwangoko baze ngakumbi ke ngoku.
Text Umyalezo Nice
Ukuba nguye emsebenzini, obulula “Ithemba usuku lwakho uza kakuhle” ngexesha lesidlo sasemini yayizakuba yindlela nice kakhulu yokubonisa uthando. Ibonisa ucinga ngaye kwaye ukuba uyakhathala. Ngoko qiniseka ukuba bamenze ndincume.
Mbuliso Nice On The Way Out Emnyango
Esithi into efana “Ubenemin emyoli” okanye “Ziphathe kakuhle” xa babesendleleni baphuma baya yokubonisa ukuba umkhathalele. Akuyomfuneko ukuba amange ukuba akukho into oyenzayo njenge goodbye ebulisa rhoqo kakhulu nangona ndiqinisekile kuya kuthakazelelwa kakhulu into.
Into yokuba abantu uthando kwiqabane ngumntu liyabaphulaphula kuba kubonisa ukuba unomdla kubo njengomntu. Kodwa umntu akazi ukuba umntu, kunye kwehla nomdla kuzo umdla wabo abonise ukuba wena. Kanye umyeke nje ube incoko akanalo kakhulu. into ezifana, “Ediza ungathanda kuni apha ngokuhlwanje” ubonisa uyamphulaphula.
Yithi Into Positive
Kugweba into oyithethayo yintoni ocinga ukuba uya kubenza bonwabe. Ngoko ke umzekelo, ukuba udlala isiginkci mxelele ukuba va udlala kakuhle chukumisa, ukuba nguye kungena fashion mxelele ukuba ukhangela kakuhle okanye ukuba uthanda umculo mxelele ukuba ukuba banolwazi kakhulu ngomculo. Ngamanye amaxesha sonke eloba besongeza elimnqakathi.
Ininzi lezibini musani athi rhoqo kakhulu xa bakholisekile umntu. Ngendlela na uthando apho ngokucacileyo kwaye mhlawumbi akuyomfuneko ukuba uthe lonke ixesha kodwa qho ngoku kwakhona bakhumbuze ukuba wena.
Ngaba Ukulungele abazinikezele Pet?
Umthande Dogs : Ngomnxeba New On Life
Dating – Ngaba bonakalise Yourself?
Ngaba Pet Allergies and Dating zihlale?